Q&A Archives - MYATMINGALAR
အချိန်၏အစနှင့် စကြာဝဠာ၏ဇစ်မြစ်အကြောင်းတွေးတောခြင်း ဘုရားသခင်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာခြောက်ပါး အစကနဦးအကြောင်းကို သင် စဉ်းစားဖူးပါသလား? သင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ? ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဘာမဆို။ ဒါမှမဟုတ် အချိန်အစောဆုံးကာလမှာ ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့အရာဘာမဆိုပေါ့။ သင့်ဦးနှောက်ကို ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းအရာကို စဉ်းစားဖူးပါသလား? ခဏလေး၊ အစကနဦးတုန်းက ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သင်ပြောပါသလား? လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းအသချေၤအနန္တကြာတုန်းက လုံးဝ ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? အဲဒါ စဉ်းစားရမယ့် Continue Reading
ဘုရားသခင်ဟာ ဘယ်သူဖြစ်သလဲ? ဘုရားသခင်က ဘာနဲ့တူသလဲ? ဘုရားသခင်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာခြောက်ပါး ကြီးမားတဲ့အကျယ်အဝန်းပမာဏနဲ့ ဆန်းကျယ်တဲ့အနုစိတ်လက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်တဲ့ ဒီစကြာဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကို ကျနော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားက သူ့အကြောင်းကိုပြောပြရုံမကပဲ တခြားအရာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူက ကျွန်တော် သူ့ကိုသိလာနိုင်ဖို့နဲ့ သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိလာဖို့အတွက် အမြဲပဲ ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့သူ့ကို သိရုံသိခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အတွင်းကျကျ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ “ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ပညာရှိသောသူသည် မိမိပညာ၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ Continue Reading
ဘုရားဆိုတာရှိသလား? ဘုရား အမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ ရှင်းလင်းတိကျသော အကြောင်းပြချက်များ (၆)ချက် ပြောပြပါမယ်။ မေရီလင်းအာဒမ်ဆင်ထံမှ ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကို တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် သင့်ကိုပြတာမျိုး မလိုချင်ဘူးလား? အကျပ်ကိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ “ယုံသာယုံလိုက်ပါ” လို့လည်း မဆိုပါဘူး။ ဟုတ်ပြီ၊ ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တချို့ကိုသာ ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုအရင်စဉ်းစားပါ။ ဘုရားတည်ရှိခြင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင်၊ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာက- တချို့သောသူတွေက Continue Reading
မေး။ ။လူကြီးတစ်ယောက်က ဗေဒင်ဟောတာလဲမှန်တယ် ၊စိတ်ဝေဒနာတွေကိုလည်း ကုပေးတယ်။ အဲဒီတော့ ကျန်မသိချင်တာက ဒီအရာတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီး အသင်းတော်ရဲ့ သဘောထားကို သိပါရစေ။ သမီးမှန်မှန်ကန်ကန် ရှင်းပြချင်လို့ပါ။ ဖြေ။ ။ လူတွေဟာ မိမိအသက်အရွယ် ကြီးလာရင် ကျန်းမာရေးမှကောင်း ပါမလား။ မိမိရဲ့ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ စသည်ဖြင့် အမြဲ စိုးရိမ်ပူပန် နေတက်ကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းရင်၊ စိုးရိမ်သောကတွေနဲ့ Continue Reading
Posted On : January 8, 2017 Published By : MYATMINGALAR
ယေရှု၏ မွေးနေ့ ရက်၊ လ၊ နှစ်တို့ကို ဖေါ်ပြပေးလို့ ရနိုင်ပါသလား၊ ဖေါ်ပြပေးနိုင်ပါက ယေရှုကို ကိုးကွယ်ပါမည်? ယေရှု၏ မွေးနေ့ကို မေးသောမေးခွန်းကြီးမှာ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ခရစ်ယာန် တို့ရှုံးနိမ့်သွားသည်ဆိုသည့် ဝါဒပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ၄င်းရွာလေးတွင် ထမ်းပိုးမညီသော လူကြီးအိမ်တစ်အိမ်ရှိပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များလာတိုင်း ၄င်းတို့၏အိမ်တွင် တည်းခို Continue Reading